Ulauncher na Synapse: 2 Ezigbo ihe ntinye nke ngwa maka Linux | Site na Linux
Mgbe m nyochachara nke ọma isiokwu nke Ebe Desktọpụ (DEs)nke Ndị na-ahụ maka windo (WMs) na Ndị njikwa mmalite (DMs), taa anyị laghachiri isiokwu nke Ndị na-ebupụta ngwa maka Linux, nke akacha mara aha bekee, dika launchers. Na nke a, anyị ga-ekwu maka ya Ulancher na Synapse.
N’ụzọ dị otu a, iji zuo ezu n’ihe ikesararịị banyere Ndị na-ebupụta ngwa (ndị na-amalite) ekwuola, dịka Brain, Albert na Kupfer, n’afọ a.
Maka ndị ahụ n'oge ahụ enweghị ike ịhụ ma ọ bụ hụ akwụkwọ anyị gara aga na nke kachasị ọhụrụ Brain, Albert na Kupfer, ị nwere ike ịnweta ha, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, site na ịpị njikọ ndị a:
Brain Plugins: Ntinye iji mee ka arụ ọrụ
O kwesịrị ka a rịba ama, tupu ị banye n'ime isiokwu ahụ n'ụzọ zuru ezu, na Ndị na-ebupụta ngwa bụ ngwaọrụ ma ọ bụ mmeju nke anyị na-etinye n'ọrụ na sistemụ arụmọrụ anyị melite anyị arụpụtaghị, site na ịba ụba ala na ọsọ nke keyboard were ime ihe. Omume nke na-aba oke uru, ọkachasị mgbe kama Desktọpụ Environment (DEs) Anyị na-eji Njikwa Window (WMs).
1 Ulauncher na Synapse: Ntinye aka maka Linux
1.1 Ihe ngosi
Ulauncher na Synapse: Ntinye aka maka Linux
Dị ka weebụsaịtị nke Ulauncher na GitHub, a kọwara ya dị ka:
"Ulauncher bụ ngwa ngwa na-ebupụta ngwa ngwa maka Linux. Edere ya na Python, jiri GTK +".
N'etiti gị atụmatụ atụmatụ ndị na-esonụ kwụpụta:
Fuzzy search: Site na mgbe ị na-ede aha arịrịọ na igbe nchọta ya, anyị nwere ike ịme ya na-echegbughi oke banyere okwu ederede, ebe ọ ga-anwa ịchọpụta ihe dị nso ihe anyị chọrọ ide iji chọọ ma ọ bụ gbaa ọsọ. Ọzọkwa, cheta nhọrọ anyị gara aga (usoro) ma họrọ akpaghị aka nhọrọ kacha mma maka onye ọrụ.
Omenala agba agba: Enyele ọrụ 4 wuru na-gburugburu ya graphical interface. Agbanyeghị, ọ na - enye gị ohere ịmepụta ma jikọtara isiokwu agba agba, dịka usoro na akwụkwọ gị.
Uzo mkpirisi na ndọtị: Ebe ọ bụ na ọ bụ usoro ihe eji eme ihe ọhụụ na nke oge a, ọ na-achọ ịkwalite usoro ọrụ ahụ site na ụzọ mkpirisi na ndọtị nwere ike ịhazi. Na-ekwe ka ndị nwere ihe ọmụma dị mkpa mepụta, site na ụzọ mkpirisi maka nchọta weebụ ma ọ bụ ụfọdụ ederede, ma ọ bụ ntinye nke ndọtị nke atọ.
Ndenye ndekọ ederede: Ulauncher na-enye ohere ka ịnyagharịa site na faịlụ na akwụkwọ ndekọ aha ya na ịdị nfe dị mma, naanị site na ịpị igodo nke ihe odide Typedị «~» o «/» ịmalite. Ọzọkwa, ịpị njikọta isi «Alt+Enter» o «Alt+Número» na-enye gị ohere ịme ụfọdụ nhọrọ ndị egosiri na ọchụchọ ahụ ozugbo.
Maka gị budata ma tinye ị nwere ike ịga ozugbo gị download ngalaba.
Dị ka weebụsaịtị nke Synapse na Launchpad, a kọwara ya dị ka:
"Ma ọ bụOnye na-ebido ihe eji eme ihe ede ede na Vala nke enwere ike iji weputa ngwa yana ichota ma nweta akwukwo na faịlụ di nkpa site na iji Zeitgeist engine".
Na-enye gị ohere ịchọgharị ihe ndị na-adịbeghị anya.
Ọ bụ nnọọ ìhè na ngwa ngwa na ọchụchọ gị.
O nwere ezigbo nkwado maka iji ngwa mgbakwunye, dịka ọmụmaatụ maka iwu ngwa ngwa Devhelp, Dictionary na Terminal.
Ọ na-enye ike iji rụọ ọrụ bara uru, dịka, jikwaa faịlụ egwu ndị nwere onwe ha ma ọ bụ metụtara onye ọkpụkpọ, chọọ faịlụ nke Sistemụ Ọrụ (Ebe, Akwụkwọ, Ihe Oyiyi, Vidiyo, Ndi ana-akpo) na-eme nchọgharị withntanetị na DuckDuckGo, jikwaa usoro Gnome onye ọrụ (Mechie, mechie, malitegharịa), mee nchọpụta ngwakọ iji Zeitgeist chọta faịlụ ndị yiri ya, ma kwụsịtụ ma kpoo kọmpụta ahụ site na iji UPower, tinyere ihe ndị ọzọ.
Maka gị budata ma tinye ị nwere ike ịga ozugbo na saịtị ahụ Launchpad ma ọ bụ wụnye ya na ebe nchekwa nke Distro gị na iwu iwu dị mfe, dịka m mere, na m MX Linux 19.2 Nkesa:
Dị ka ị nwere ike nyochaa, Ulauncher na Synapse bụ 2 magburu onwe ngwa launcher uzo ozo ka Brain, Albert na Kupfer. Ọ fọdụrụ naanị ịhụ nke n'ime ndị a 5 ma ọ bụ ndị ọzọ dịnụ nke kachasị mma Linux.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a kacha ọhụrụ 2 ngwa launchers akpọ «Ulauncher y Synapse», nke na-emeju ndị gara aga na «Cerebro, Albert y Kupfer»; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ulauncher na Synapse: 2 Ezigbo ihe ntinye nke ngwa maka Linux
CRIU, sistemu iji chekwaa ma weghachite ọnọdụ nke usoro na Linux